တစ်ယူကျု့ချန်နယ်ဖန်တီးလုပ်နည်း | YouTube ကိုဗီဒီယို Upload လုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို | ယူကျု့ချန်နယ်ငွေရအောင်လုပ်လုပ်နည်း | WikiWon
တစ်ယူကျု့ချန်နယ်ဖန်တီးလုပ်နည်း | YouTube ကိုဗီဒီယို Upload လုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို | ယူကျု့ချန်နယ်ငွေရအောင်လုပ်လုပ်နည်း
mujeer မတ်လ 1, 20170မှတ်ချက်များ
တစ်ယူကျု့ချန်နယ်ဖန်တီးလုပ်နည်း, YouTube ကိုဗီဒီယို Upload လုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို. ယူကျု့ချန်နယ်ငွေရအောင်လုပ်လုပ်နည်း. အားလုံးဟိုင်း! ငါသည်သင်တို့ကိုဒဏ်ငွေများမှာမျှော်လင့်ပါတယ်. ဒီနေ့ကိုယ့်တို့၏ YouTube ချန်နယ်အကြောင်း discus. သငျသညျ YouTube ကိုအဘယ်သို့သိခဲ့ပါ. ပထမဦးဆုံးမှတ်ချက်၌ငါ့ကိုပြောပြပါ. ကိုယ့်မည်မျှအဆင့်အထိတိုးမြှင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်ချင်သည်သင်၏စိတ်ကိုအဘယျသို့င်. အခုတော့ငါဆိုသညျကား. YouTube ကိုဒီဝင်ငွေ၏၎င်း၏နှုန်းနေ့က google ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်, သူတို့၏အသားတင်အမြတ်လည်းခန့်မှန်းခြေခဲ့သည်: Extrapolating, တစ်ဦးလော်ဂရစ်သမ်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သူတို့ကပတ်ပတ်လည်ကိုရှင်းလင်းအံ့သောငှါယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည် $6.3 ဘီလီယံအထိ ဝင်ငွေ, အကြောင်းမှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်သော $17.26 သန်း တစ်နေ့လျှင်. ဝင်ငွေ. ငါသည်သင်တို့ကိုခြေလှမ်းနေဖြင့်ခြေလှမ်းကိုပြောပြ. ယူကျု့ချန်နယ်ဖန်တီးလုပ်နည်း, ပထမတစ်ခုက gmail ကဖန်တီး, ယခုမှာ google YouTube ကိုအတွက်ရှာဖွေပြီးခလုတ်ကိုအထက်တွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ tab အသစ်ပြသ. သငျသညျပြီးသားသင့် browser ထဲမှာ login လျှင်၎င်း၏အလွယ်တကူသင်သည်ရုပ်သံလိုင်းရထို့နောက်ထို့နောက်သင်ပြီးသား login ဘူး. button ကို click နဲ့ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အီးမေးလ်အသစ် tab ကိုသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းပြသထား. တိုက်ရိုက် YouTube ကိုဘက်ခြမ်း၌တပိုပြီးအသစ် tab ကိုပြရန်. ဒီအမျိုးအစားထဲမှာတချို့စကားသည်ကိုပြသ. “CREATE YouTube CHANNEL” Click it. လည်းရာထူးထိပ်ဆုံးမှအမြန်သွားလာရင်းနှင့်အတူကဲ့သို့သင်တို့အမည်ကားအဘယ်သူ. တချို့က name ကိုသူ့ရဲ့. “ALONE WALKER, ငွေရှာဖို့ပုံ, KEYWORDS, လက်ရေးရုပ်ပုံကြီး, BIG င်ငွေ, Blogger MASTER, YouTube ကိုကျွမ်းကျင်သူ, အခု name ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်တဦးတည်းသစ်ကိုယူကျု့ချန်နယ်တယ်ကဲ့သို့သင်တို့အမည်ကားအဘယ်သူ, သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကနေ YouTube ကိုသင်၌ဗီဒီယို upload လုပ်နည်း, အထက်ဘက်ခြမ်းလွှတ်တင်ခြင်းခလုတ်ကိုကလစ်ရှိပြီးသား button ကိုဖူး, သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအသစ်တချို့ tab ကိုပြသသည်၎င်း၏ပြပွဲသင်္ကေတ, __ ^|^ __ ဒီသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ. တိုက်ရိုက်အဘယ်သူ၏ဗီဒီယိုသင်သည်သင်၏ယူကျု့ချန်နယ်အတွက်အချို့ video.That ကိုကလစ်နှိပ်ပါပိုပြီးဗီဒီယိုအပ်လုဒ်ကို upload တင်ချင်တယ်သင်၏ကွန်ပျူတာဗီဒီယိုချင်တယ်. အများဆုံးဖူး 200 သငျသညျလျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုထင်လျှင်သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းမှာဗီဒီယိုယခုအဖြေတစ်ခုရှိကိုမစိုးရိမ်ကြ adsense လျှောက်ထားရန်သွား. လက်ဝဲဘက် bar မှာရုပ်သံလိုင်းဘက်ခြမ်းသို့သွားရန်, နှင့်ပြပွဲခလုတ်ကိုငွေရရှိအောင်လည်း option ကို click နှိပ်ပြီး enable ကိုပြသ. အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်. သငျသညျလကျခံကိုကလစ်နှိပ်ပါကိုလက်ခံလျှင်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါတ tab ကိုလိုအပ်ချက်များကိုပြသ,YouTube ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် verification ချင်သော code များဘက်၌ထားသင့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ code ကိုပေးပို့နှင့်ခံယူ, ထို့နောက် YouTube ကိုသင်သည်သင်၏ဗီဒီယိုများငွေရရှိအောင်မှငွေရရှိအောင်၎င်း၏အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းချင်တယ်, ဗီဒီယိုမန်နေဂျာကိုသွားနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဗီဒီယိုအားလုံးကိုအထက်ဘက်ခြမ်း၌တ button ကိုယခုကကိုကလစ်နှိပ်ပါပြပြပွဲငွေရစေခြင်းခလုတ်ကိုနောက်တဖန်အချို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါကသင့်ချန်နယ်အနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့ YouTube ကိုလိုခငျြငွေရအောင်လုပ်ပါစောင့်ဆိုင်းနှင့်ရလဒ်စစ်ဆေး.
ပထမတစ်ခုက gmail ကဖန်တီး.
ယခုမှာ google YouTube ကိုအတွက်ရှာဖွေပြီးခလုတ်ကိုအထက်တွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သငျသညျပြီးသားသင့် browser ထဲမှာ login လျှင်၎င်း၏အလွယ်တကူသင်သည်ရုပ်သံလိုင်းရထို့နောက်ထို့နောက်သင်ပြီးသား login ဘူး.
သင့်အီးမေးလ်အသစ် tab ကိုသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းပြသထား.
လည်းရာထူးထိပ်ဆုံးမှအမြန်သွားလာရင်းနှင့်အတူကဲ့သို့သင်တို့အမည်ကားအဘယ်သူ. တချို့က name ကိုသူ့ရဲ့. “ALONE WALKER, ငွေရှာဖို့ပုံ, KEYWORDS, လက်ရေးရုပ်ပုံကြီး, BIG င်ငွေ, Blogger MASTER, YouTube ကိုကျွမ်းကျင်သူ.
သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကနေ YouTube ကိုသင်၌ဗီဒီယို upload လုပ်နည်း.
အထက်ဘက်ခြမ်းလွှတ်တင်ခြင်းခလုတ်ကိုကလစ်ရှိပြီးသား button ကိုဖူး.
သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအသစ်တချို့ tab ကိုပြသသည်၎င်း၏ပြပွဲသင်္ကေတ, __ ^|^ __
တိုက်ရိုက်အဘယ်သူ၏ဗီဒီယိုသင်သောသူအချို့ဗီဒီယိုကလစ်နှိပ်ပါ upload ချင်သင်၏ကွန်ပျူတာဗီဒီယိုချင်တယ်.
အများဆုံးဖူး 200 သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းမှာဗီဒီယို.
သင့် YouTube ချန်နယ်ဗီဒီယိုငွေရအောင်လုပ်ပါရန်ကိုဘယ်လို.
လက်ဝဲဘက် bar မှာရုပ်သံလိုင်းဘက်ခြမ်းသို့သွားရန်, နှင့်ပြပွဲခလုတ်ကိုငွေရရှိအောင်လည်း option ကို click နှိပ်ပြီး enable ကိုပြသ.
ပြပွဲ option ကို click နှိပ်ပြီး enable.
ဒါကြောင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါတ tab ကိုလိုအပ်ချက်များကိုပြသ.
ဖုန်းနံပါတ် code ကိုပေးပို့နှင့်ခံယူ.
အထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ button ကိုယခုကကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
တဖန်သင့်ချန်နယ်တွင်အနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့ YouTube ကိုလိုခငျြငွေရအောင်လုပ်ပါ.
ငွေရယူနိုင်သော	how does youtube monetization work, how many views on youtube till you get paid, how much money from youtube, how to earn money from youtube by uploading videos, how to earn money from youtube in hindi, how to earn money from youtube views, how to earn money from youtube without adsense, how to enable monetization on youtube, how to enable monetization on youtube 2016, how to make money from facebook, monetization meaning, monetization youtube meaning, youtube monetization calculator, youtube monetization how much money, youtube monetization rates, youtube monetization rules	bookmark
ယခင်အပိုဒ် အဆင့်များက Yoast SEO ဆိုသည်မှာအဆင့်အတွက် Bing မှ Webmaster Tool ကိုတင် Get လုပ်နည်း.
next ကိုပုဒ်မ Fibre ၏ကောင်းသောသတင်းရပ်ကွက်များ | အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Fibre | ပျော် Fibre | Fibre ၏အကျိုးကျေးဇူးများ | ရောဂါ Fighting